Nanokatra an'i Gates ho any Eropa i Torkia ho an'ny Syriana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanokatra an'i Gates ho any Eropa i Torkia ho an'ny Syriana
Mailo be i Eropa, tsy ho an'ny Coronavirus ihany fa ho an'ireo mpitsoa-ponenana avy any Syria miditra amin'ny faritr'i Schengen.
Ny OTAN "Mpiara-miasa" NATO dia hamela ny mpitsoa-ponenana handao ny fireneny rehefa nandefa hetsika miaramila tany Syria izy, hoy ny governemanta Tiorka tamin'ny Alahady teo afovoan'ny tahotry ny mpitsoa-ponenana an'aliny tonga any Torkia avy any Syria noho ny fanafihana nataon'ny fitondrana Syriana tohanan'ny Rosiana.
“Nanitsy ny politikanay izahay ary tsy hanakana ny mpitsoa-ponenana hiala an'i Torkia. Raha jerena ireo loharanon-karena sy mpiasa voafetra ananantsika dia mifantoka amin'ny fandaminana ny fifandonana izahay raha misy fidiranana lavitra avy any Syria fa tsy ny fisorohana ireo mpitsoa-ponenana izay mikasa ny hifindra monina any Eropa, ”hoy ny bitsika nataon'i Fahrettin Altun, talen'ny fifandraisana an'ny filoha tiorka Recep Tayyip Erdoğan.
Nilaza i Torkia fa tsy afaka mandray mpitsoa-ponenana bebe kokoa izy ireo satria mampiantrano mpitsoa-ponenana Syriana 3.7 tapitrisa, betsaka noho ny firenena hafa.
Nandrahona nandritra ny volana maro i Erdoğan tamin'ny “fanokafana ny vavahady” fifindra-monina ho an'ny Vondrona Eropeana raha toa ka tsy nanohana ny drafitra ho an'ny “faritra azo antoka” any Syria izay tian'i Torkia hamerina Syriana an-tapitrisany.
Fanafihana nataon'ny filoha Syriana tohanan'ny Rosiana Bashar al-Assad haka ny toerana mimanda lehibe sisa tavela any Syria dia nanosika olona an'aliny ho any amin'ny sisintanin'i Torkia.
Ny fanadihadiana dia milaza fa ny ankamaroan'ny olom-pirenena tiorka dia maniry ny hiverina any Syria ireo mpitsoa-ponenana Syriana ary ny lolom-po be dia be dia noheverina ho resy noho ny faharesen'ny antoko Erdoğan tamin'ny fifaninanana ben'ny tanàna tamin'ny taon-dasa ho an'ny Istanbul.
Ny minisitry ny atitany tiorka dia nibitsika ny alahady teo fa mpifindra monina 76,358 XNUMX no nandao an'i Torkia tamin'ny fiampitana amina sisintany niaraka tamin'i Gresy.
Ny tarehimarika avy amin'ny loharanom-baovao hafa dia nametraka ny maha-marina ny fitakiana.
Nilaza ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina fa misy mpifindra monina 13,000 mahery manaraka ny sisin-tany Tiorka-Grika amin'ny asabotsy hariva.
Nilaza ny tompon'andraikitra grika iray fa "nisy fikasana 9,600 hanitsakitsaka ny sisin-taninay, ary vita tsara avokoa ny rehetra," hoy ny tatitra nataon'ny masoivohom-baovao Reuters.
Fanambarana iray avy amin'ny filohan'ny filankevitra eropeana no nilaza fa ny EU dia vonona hanolotra fanampiana mahaolona bebe kokoa ary hiaro ny sisintaniny any Gresy sy Bulgaria, izay samy sisin-tanin'i Tiorkia.
Ny ankamaroan'ny vondrona eropeana dia ao amin'ny faritr'i Schengen, ahafahan'ny olona mivezivezy tsy misy fanamarinana pasipaoro hiditra ao amin'ilay faritra. Gresy sy Bulgaria, izay mifanila amin'i Torkia, dia teboka fidirana ao amin'ny Zone Schengen.
Ny alahady no andro voalohany nanomboka tamin'ny fe-potoana farany nofaran'i Torkia hiverenan'ny herin'i Assad any Idlib.
Ny Minisiteran'ny Fiarovana Tiorka dia nanambara fa nandefa ny Operation Spring Shield tao Idlib i Torkia ho valifaty ny fanafihana ny alakamisy alina izay namono miaramila Tiorka 33, hoy ny tatitra nataon'ny masoivohom-baovao Turki.
Ryan Bohl mpandalina Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ao Stratfor, vondrona mpanolo-tsaina manerantany, dia tsy nino fa azo inoana fa hanangana fanafihana miaramila marobe i Torkia, na dia hitohy aza ny fanafihana ny herin'ny fitondrana.
"Manondro izany fa tsy mino i Ankara fa mbola mila mivoaka ny diplaomatika", hoy i Bohl tamin'ny The Media Line.
Nanambara i Bohl fa raha mampidina ny drôna Tiorka i Russia dia ho hita fa fiakarana hafa izany satria fifandraisan'ny miaramila mivantana eo amin'ny roa tonta.
"Tsingerin'ny fiakarana izay tsy tian'i Torkia hiditra ao," hoy izy. "Manandrana manery ny iray hafa izy ireo hanomboka ny fizotran'ny fihenan'ny asa aloha."
Muzaffer Şenel, profesora mpanampy amin'ny siansa politika sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny Oniversiten Istanbul Şehir, dia nilaza fa ny tanjon'i Russia dia ny handresy lahatra an'i Torkia hifampiraharaha amin'i Assad saingy vonona ny hamoy ny fifamatorana amin'i Ankara i Moskoa hitazomana ireo izay manana an'i Damasy.
Rosia sy Torkia dia nanamafy ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny fifampiraharahana amin'ny angovo sy ny fitaovam-piadiana manimba ny fifandraisan'i Ankara amin'ny Andrefana sy ny OTAN.
Ny fividianan'i Torkia ny taona lasa teo amin'ny rafitra balafomanga rosiana dia niteraka fanamelohana mafy avy amin'ny tafiky ny tafika ary nampitandrina ny sazy mihatra amin'i Ankara i Washington.
Mino ny mpandinika fa i Erdoğan dia maniry mafy hanana politika ivelany mahaleo tena kokoa izay tsy iantehanan'i Torkia tanteraka amin'ny OTAN.
Na izany aza, ny krizy tany Idlib dia nanosika an'i Torkia hanakaiky ny Andrefana ary nanery ny mpiara-dia amin'ny OTAN hanohana bebe kokoa an'i Syria, indrindra ho an'ny balafomanga US Patriot izay nolavin'i Ankara tamin'ny fividianana ny taon-dasa ho valin'ny fitaovam-piadiana Rosiana.
Erdoğan dia niresaka tamin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny sabotsy alina, nangataka fepetra marim-pototra firaisankina, hoy ny masoivohom-baovao Turki.
Ny tatitra dia nanambara fa ny Macron dia namporisika an'i Russia hampitsahatra ny fanafihana nataony ao Idlib.
Nilaza i Şenel fa voafetra ny valintenin'ny tafika ao Idlib noho ny tsy fisian'ny herin'habakabaka hiarovana ny tafiny an-tanety nefa mbola hanohy ny fanafihana ny tafiky ny fitondrana Syriana mialoha ny fifampidinihana amin'i Moskoa.
“Raha te ho matanjaka amin'ny latabatra ianao [
tokony ho matanjaka amin'ny tany, ”hoy i Şenel nanoratra tamin'ny hafatra ho an'ny The Media Line.
"Ny fiaramanidina mpiady dia handaroka baomba ny herin'ny tany Tiorka ary tsy misy ny fanohanan'ny OTAN na ny rafitra fiarovan'ny rivotra, safidy [toa] tena voafetra," hoy izy nanampy.
Nosoratan'i Kristina Jovanovski / Ny tsipika Media
Mijanona tsy mandeha amin'ny COVID-19 intsony ve ny Isiraeliana?